အသေးစားလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ - MICConD စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / အသေးစားလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-03-02 မူလ:ဆိုက်ကို
လျှပ်စစ်ကြေးနန်းကိရိယာအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်၎င်း၏အဆောက်အအုံငယ်များနှင့်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်သုံးစွဲသူများစွာမှတညီတညွတ်တည်းချီးမွမ်းခြင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းကိုများသောအားဖြင့်များစွာအသုံးပြုသည်အသေးစားလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်များ,လူအတော်များများကအဲဒါကိုပိုပြီးနားမလည်ကြဘူး။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားသက်ဆိုင်ရာနှင့်မိတ်ဆက်ပေးမည်အသေးစားလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်နှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာ,နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအတူတကွသိကြကုန်အံ့။
1)လျှပ်စစ်ကြိတ်စစ်ဆေးနေသည့်အဓိကကိုယ်ထည်S 200 Watts 200 Watts 200 ၏စွမ်းအားနှင့်ပျော့ပျောင်းသောနှင်တံနှင့်အတူလျှပ်စစ်မော်တာတစ်ခုဖြင့်ရေးစပ်ထားသည်။ လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များကိုအရ, Drill-bits အမျိုးအစားများအရအမျိုးမျိုးသောလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးမျိုး, ဖြတ်တောက်ခြင်းများ, ကြိတ်ခြင်းများ, ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အစိတ်အပိုင်းသုံးခုရှိသည် - ထိန်းချုပ်မှုအကွက်, လက်ကိုင်နှင့်နင်းနှင့်နင်း switch switch ကိုထိန်းချုပ်ရန်။ ၎င်း၏မြန်နှုန်းကထက်ပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်ကြီးမားသောလျှပ်စစ်ကြိတ်သမားများရွေးချယ်ခံရနိုင်ပြီး၎င်းသည် ပို. တည်ငြိမ်သည်, လူများသည် Jitters ကို အသုံးပြု. Jitters ကိုမခံစားရနိုင်ကြပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်တိကျသောထွင်းထုခြင်း, တံဆိပ်ခတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အခြားအလုပ်များအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်။
2)လျှပ်စစ်ကြိတ်တံ၏ပျော့ပျောင်းသောနှင်တံလွတ်လပ်စွာလှိမ့်နိုင်သည့်ဝါယာကြိုးကြိုးဖြင့်ဆွန်းပျော့ကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပျော့ပျောင်းသောနှင်တံ၏အဆုံးသည်ဘောပင်ပုံတွင်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဘောပင်ပုံအဖုံးသည် 15 စင်တီမီတာအရှည်နှင့်အချင်း2စင်တီမီတာရှိသည်။ Core သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောကြိုးဖြင့်မော်တာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောပုံသဏ္ of ာန်ကြောင့်စစ်ဆင်ရေးသည်အလွန်အထိခိုက်မခံ။ အဆင်ပြေသည်။
1) ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရိုးတံကိုထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကြိတ်ခြင်းခေါင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းကိုထည့်သွင်းသောအခါပါဝါ plug ကိုဖြုတ်ရန်သေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရိုးတံနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အကြား chuck ကိုသော့ခတ်ရန်လိုအပ်သည်။ လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်သည်ပါဝါနှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါပါဝါခလုတ်သည်ပိတ်ထားရမည်။ ထုတ်ယူခြင်းမပြုမီ, workpiece ကိုအခိုင်အမာပြုပြင်ရန်အပြင်လျှပ်စစ်ကြိတ်စစ်ဆေးမှုများကိုလည်းစမ်းသပ်သင့်သည်။0န်ခံပြီးမှသာမူပုံမှန်မဟုတ်သောအရာမရှိကြောင်း0န်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
2) ခွဲစိတ်ကုသမှုမတိုင်မီအသုံးပြုသောကြိတ်ဆုံကောင်များကိုဂရုတစိုက်စစ်ဆေးသင့်သည်။ ပျက်စီးသွားသောသို့မဟုတ်အက်ကွဲခြင်းကြိတ်ခြင်းများကိုအသုံးပြုရန်တားမြစ်ထားသည်။ အသုံးပြုသောအခါအကာအကွယ်မျက်မှန်ကိုဝတ်ဆင်ရန်သတိရပါ။ အစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်သည့်အခါလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ပေါ်လက်ဖြင့်ဖိအားပေးမှုကိုစနစ်တကျထိန်းချုပ်ထားသင့်သည်။ အပြောင်းအလဲအတွက်ဖြတ်တောက်ခြင်းအပိုင်းကိုအသုံးပြုသောအခါလူတို့အားဖြတ်တောက်ထားသောအပိုင်းအစများကိုလူတို့အားလူတို့အားချိုးဖောက်ခြင်းဖြင့်ဖြတ်တောက်မှုမှလူများကိုထိခိုက်စေခြင်းမှရှောင်ရှားရန်လိုအပ်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။
အထက်ပါနိဒါန်းကိုနားထောင်ပြီးနောက်နှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အသေးစားလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်များ၏ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ,လူတိုင်းသည်လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ငယ်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်လိုသည်။အသေးစားလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်၏အခန်းကဏ္။သိသာထင်ရှားသည်မှာအလွန်အမင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလူအများစုကအသိအမှတ်ပြုသည်, ထို့ကြောင့်စျေးကွက်တွင်လူကြိုက်များသည်ဟုမလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့0ယ်ယူရာတွင်ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်0ယ်လိုသူကိုကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးလိုဆဲဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကိရိယာ အသေးစားလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်များ အသေးစားလျှပ်စစ်ကြိတ်သမားနှင့်ပတ်သက်။ အသိပညာ အသေးစားလျှပ်စစ်ကြေးနင်း၏အင်္ဂါရပ်များ လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်၏အဓိကခန္ဓာကိုယ် ကြီးမားသောလျှပ်စစ်ကြိတ်သမားများ လျှပ်စစ်ကြိတ်တံ၏ပျော့ပျောင်းသောနှင်တံ အသေးစားလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်၏အသုံးပြုမှု အသေးစားလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်များ၏ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ အသေးစားလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်၏အခန်းကဏ္။